Vietnam Car Company started building an EV battery plant ﻿
Vietnam အခြေစိုက် ကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလည်း ကိုယ်ပိုင် လျှပ်စစ်ကားဘက်ထရီထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံတစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့
Vietnam နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vingroup မှ ကန်ဒေါ်လာ ၁၇၄ သန်း တန်ကြေးရှိ ဘက်ထရီ cell ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတစ်ခုကို ၎င်းတို့ရဲ့ VinFast တံဆိပ် လျှပ်စစ်ကားလုပ်ငန်းအတွက် ကိုယ်ပိုင် battery supply chain တစ်ခုအား ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်၍ စတင်တည်ဆောက်လျှက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
VinFast ဟာ Vietnam ပြည်တွင်းတွင် နာမည်ရပြီးသော ကားထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ကာ ၎င်းတို့ရဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကားမော်ဒယ်လ်များကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စတင်၍ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းသို့ ဖြန့်ချီမှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ အမေရိကဈေးကွက်အတွင်းတွင် ၎င်းတို့ရဲ့ လျှပ်စစ် SUV များကို ထိုးဖောက်နိုင်ဖို့ စီစဉ်လျှက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ကားဘက်ထရီကို နှစ်သက်ရာဌားရမ်းထည့်သွင်းနိုင်မည့် model များကိုလည်း လာမည့်နှစ်အတွင်း စတင်နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
အဆိုပါ Vietnam နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး လျှပ်စစ်ကားဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံကိုတော့ Ha Tinh မြို့လယ်ခေါင်ရှိ ဧက (၂၀) ကျယ်သော မြေကွက်တွင် တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.We have over 700 e...
Titan Pest Management Co. Ltd.
...Titan Pest isafull-services pest management company operating in Yangon since 2016 and specializing in urban pest management solutions. It isasubsidiary of the highly successful Killem Pest Pte...
Myanmar Promotional Services ( Event Management )
To Promote business and enhance trades in academic ways ( Exhibitions and Trade Show ) for the country to develop and grow rapidly in many respective fields We are promoting the business and enha...
Victory Myanmar Group Co., Ltd.
..The Victory Myanmar Group (VMG) was created in 2009 based on organic growth and the acquisition of Mandalay Rum which was established in 1886 which now sells over 1.8 million cartons per year. Our p...
DHL Global Forwarding Myanmar
Vision: Our Purpose Our Guiding Principle Our Customer PromiseDHL Global Forwarding Myanmar was opened in August 2013 and is providing freight forwarding services, international supply chain servic...